CYBER MONDAY 2022: azụmahịa kacha mma na laptọọpụ dị ọnụ ala
Cyber ​​​​Monday 2022 na-emekọ na laptọọpụ
N'okpuru bụ ndepụta nke azụmahịa Cyber ​​​​Monday 2022 na laptọọpụ ị nwere ike ịnụ ụtọ ugbu a iji chekwaa ego na ịzụrụ laptọọpụ dị ọnụ ala:
Soro anyị na Facebook ma anyị ga-agwa gị na Cyber ​​​​Monday 2022
Mee ka m mara site na onyinye Cyber ​​​​Monday 2022
Laptọọpụ na-ere na Cyber ​​​​Monday
Laptọọpụ HP na-enyekarị ezigbo ego n'oge Cyber ​​​​Monday. N'ime afọ ndị ọzọ, ha na-enyekwa ezigbo uru maka ego, mana ọ bụ na ngwụcha izu tupu Cyber ​​​​Monday na n'oge "Cyber ​​Monday" mgbe anyị nwere ike ịchọta ego nke gburugburu 40% na ụfọdụ ụdị ha.
Onyinye Cyber ​​​​Monday
Ka oge na-aga, i7 na-aghọwanye ihe nhazi nke laptọọpụ na-ebuli akwadoro maka ọtụtụ ọrụ. Ọ bụghị ike kachasị ike nke Intel, mana, yana ọtụtụ ụdị na-ebugo ya, ọ ga-abụ na anyị ga-achọta ezigbo azụmahịa n'oge Cyber ​​​​Monday.
Ọ bụ ezie na ọ ka dị n'ọtụtụ ìgwè, ọ bụ na ndị a na-ewere taa n'etiti etiti, ma ọ bụ nke kacha nta nke ihe bara uru. Ojiji ya juru ebe niile na ọnụahịa ya adaala n'ihi na ọ dịlarị ọtụtụ ọgbọ n'azụ kacha elu nke oke Intel. Na a na-eji ya n'ọtụtụ ụdị pụtara na ọ na-ewu ewu, na n'oge Cyber ​​​​Monday anyị ga-ahụ laptọọpụ nwere Intel i5 processor nwere nnukwu ego.
Kọmputa emebere maka egwuregwu enweghị ike ịbụ akụrụngwa pụrụ iche. Ha na-ebuli ihe ndị dị elu karịa nke ndị laptọọpụ na-eji amụ ihe ma ọ bụ na-arụ ọrụ, na mgbakwunye na inwe ihuenyo dị mma, na-eguzogide ọgwụ na inwe atụmatụ ike ike. Ndị na-egwu egwuregwu na-achọkarị ha, ọ bụ ya mere ha ji bụrụ ngwaahịa na-ewu ewu ruo ogologo oge na, dị ka ndị dị otú ahụ, anyị ga-ahụ ọtụtụ kọmputa egwuregwu n'oge Cyber ​​​​Monday. Na eziokwu dị mkpa: na-eburu n'uche na anyị na-ekwu maka kọmputa ndị na-enwekarị ọnụ ahịa dị elu, n'oge "Cyber ​​Monday" anyị nwere ike ịchekwa ọtụtụ narị euro.
Laptọọpụ Lenovo dị n'ụdị ụdị ọ bụla, nke mere ụfọdụ ji eche na ha adịghị mma. Ọ dịghị ihe ọzọ si eziokwu: ha bụ ndị ọzọ oke na ugwu ka njọ components, gụnyere keyboards, ndị dị ọnụ ala, ma na-eme ka ndị ọzọ mma e mere ụdị na elu components na-mma. Dị ka akara ndị China, ọ na-enyekarị ngwaahịa ndị nwere ọnụ ahịa ego dị mma, nke a ga-akawanye mma n'ụbọchị dị ka Cyber ​​​​Monday.
Laptọọpụ Asus na-enyekarị ezigbo ego maka afọ niile, ọ bụkwa akara ama ama maka nke a. N'ime katalọgụ ya, anyị na-ahụ ụdị maka mkpa dị iche iche, gụnyere ụfọdụ kacha mma maka egwuregwu. N'oge Cyber ​​​​Monday, ọnụ ahịa ndị a na-agbanwe agbanwe na-agbakwunyekarị mbelata na-atọ ụtọ nke, na ụdị kachasị elu nke oke ha, ga-enye anyị ohere ịchekwa narị narị euro.
Kọmputa nwere ihuenyo inch 15 bụ ndị a na-ewere nha dịka ọkọlọtọ n'ihi na ha dị mma. Dị ka ndị dị otú ahụ, na nke a na ihuenyo anyị nwere ike ịhụ n'ezie ihe niile, gụnyere ụfọdụ na components nwere uche nke na ha siri ike ịkwaga sistemụ arụmọrụ. Mana nke a bụ ihe a na-adịghị ahụkebe, ebe ọ bụ na ọ dịkarịsịrị mfe ịchọta akụrụngwa etiti ma ọ bụ ọbụlagodi akụrụngwa dị elu. N'ịbụ ndị kachasị ahazi nke ọma, o doro anya na n'oge Cyber ​​​​Monday, anyị ga-achọta ezigbo onyinye, ọ bụ ezie na ezi uche dị na ya, ndị a ga-adabere na ika na ụdị ahọrọ.
Emepụtara Laptọọpụ nwere ihuenyo inch 17 maka ndị chọrọ ntakịrị ntakịrị. N'ozuzu, ha abụghị kọmpụta na-ebunye ihe ndị dị iche iche, kama ndị dị n'ime ya gụnyere ngwaike maka ndị na-achọ ntakịrị ihe, dị ka ndị na-egwu egwuregwu ma ọ bụ ndị na-egwu egwuregwu. Na mgbakwunye, a na-ahọrọkarị ha maka ndị na-arụ ọrụ na mbipụta nke ọdịnaya multimedia. Ụdị ihuenyo 17-inch abụghị nke kachasị ewu ewu, mana ha ga-enweta ezigbo ego n'oge Cyber ​​​​Monday.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele azụmahịa niile na laptọọpụ ndị dị na ụbọchị Black Friday, ebe a ị nwere ike ime ya. Ọtụtụ onyinye emebiela mana ndị ọzọ ka na-akwụ ụgwọ ọnụ ahịa ha ma ọ bụ bilitere ntakịrị, yabụ na ha nwere ike bụrụ ezigbo ohere iji chekwaa ego ma mee ka ịzụrụ dị ọnụ ala karịa.
Cyber ​​​​Monday na MacBook
Apple MacBooks bụ ngwaahịa na-adọrọ adọrọ ma na-adọrọ adọrọ, yana otu n'ime nhọrọ ndị akwadoro na ahịa maka ndị na-azụ ahịa n'ihi uru asọmpi ha niile. Ebee ka nsogbu ọtụtụ ndị ọrụ na-ahụ na ngwaahịa a dị? Ọnụahịa, nke, ọ bụ ezie na ọ dị iche iche dabere na ihe nlereanya na nkọwapụta, na-adịkarị oke ọnụ maka ọtụtụ ndị ahịa nwere ike. Ya mere, Cyber ​​​​Monday bụ ụbọchị kachasị mma ịwụba n'otu oge na maka ịzụrụ nke ọhụrụ. Ma iji megharịa akụrụngwa ochie gị ma ọ bụ n'ikpeazụ gbanwee gaa na sistemụ arụmọrụ macOS na gburugburu ebe obibi Apple, na Cyber ​​​​Monday ị nwere ike zụta MacBook ọhụrụ nwere nnukwu mbelata pasentị, yana onyinye ma ọ bụ onyinye ị na-eche.
Ugbu a, MacBook dị ọnụ ala ma ọ bụ dị ọnụ ala nke anyị nwere ike ịhụ na ahịa bụ MacBook Air, laptọọpụ nke dị ntakịrị n'okpuru ụdị ndị ọzọ nke ika ahụ na ihe ndị dị ka imewe, ihuenyo na ike. Ihe nlereanya a na-amalite site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1000 euro. Ọ bụrụ na anyị gaa na MacBook kacha ugbu a, anyị ga-amalite site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1500 euro. Ma ọ bụrụ na anyị na-achọ MacBook Pro nwere nkọwa ndị ọzọ ezubere maka ndị na-ege ntị ọkachamara nwere mkpa dị iche iche, ma ọ bụ ihuenyo buru ibu, ọ nwere ike bulie ọnụahịa ya na euro 2500 ma ọ bụ 3000. Ọ bụrụ na anyị enweta ego dị ka nke Fnac na-enye, nke ihe dịka 20%, anyị na-ekwu maka ịchekwa 20 n'ime 100 euro, ma ọ bụ ihe bụ otu, 200 euro na MacBook Air na ihe atụ. Mana n'ezie, ịga na kọmpụta dị oke ọnụ na oke dị elu, ego a ga-echekwa ga-adị ukwuu. Nke a na-emekwa na ụlọ ahịa ndị ọzọ, nke ọ bụla nwere ọnọdụ ya na ụdị onyinye ya. Dịka ọmụmaatụ, Amazon na-enye anyị azụmahịa ọkụ ọkụ ụbọchị niile.
Jiri ohere nke ụbọchị a nweta MacBook Apple na ọnụahịa kacha mma yana n'ụlọ ahịa ọkacha mmasị gị, site na ụlọ ahịa anụ ahụ ma ọ bụ site na webụ, dịka ọdịnala Cyber ​​​​Monday siri dị.
Kedu mgbe bụ Cyber ​​​​Monday 2022
Cyber ​​​​Monday bụ ụbọchị na-amalite na Black Friday, yabụ mgbe ị na-achọ ụbọchị ịzụ ahịa n'ịntanetị, anyị ga-alaghachi azụ na Fraịde gara aga. Kedu mgbe Black Friday bụ afọ a? Ụbọchị na-esote Ekele, nke afọ a 2022 dabara na Nọvemba 26, yabụ Black Friday bụ Nọvemba 26. Anyị na-echere ụbọchị 3 ọzọ wee rute ụbọchị Mọnde, Cyber ​​​​Monday ma ọ bụ Cyber ​​​​Monday. Ụbọchị na-amasị anyị nke ukwuu ịzụrụ anyị niile site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ma ọ bụrụ na Black Friday bụ Nọvemba 26, Cyber ​​​​Monday ga-ada na Nọvemba 29. N'ime ụbọchị abụọ ahụ, anyị ga-enwe usoro ịnye na mbelata ego, kamakwa na Satọde na Sọnde, dabere na ụlọ ahịa na ụdị. Ime ọtụtụ n'ime izu ụka a na ụbọchị ndị a iji zụọ ahịa ekeresimesi ma ọ bụ ịzụrụ ihe na-echere dị oke mkpa iji nweta ọnụ ahịa kachasị mma, chekwaa dị ka o kwere mee ma buru ụdịrị mbụ na ọnụ ahịa nke abụọ.
Dịka ọmụmaatụ, laptọọpụ ahụ maka kọleji ma ọ bụ ọrụ ị na-eche ogologo oge nwere ike ime ya na ọnụ ahịa ị na-agaghị echetụ n'echiche. Ọ bụrụ n’ịhọrọ akara dị ka ewu ewu na akwadoro dị ka Apple, ị ga-achọpụta nnukwu mbelata na-abịa na Black Friday, ma ọ bụ ihe kwekọrọ, Cyber ​​​​Monday. Nọvemba 29 nwere ike ịbụ ụbọchị kachasị mma iji were laptọọpụ ma ọ bụ MacBook n'ọnụ ahịa a na-ahụtụbeghị mbụ. Agbagharala ohere ahụ, ị ​​maara ihe ụbọchị bụ, ugbu a dee ya na kalenda ma buru ya n'uche. Ọzọkwa, echefula inwe kaadị kredit gị ma ọ bụ akaụntụ PayPal dị njikere maka nnukwu ụbọchị. Ọtụtụ n'ime ihe ndị a na-enye bụ nwa oge na ngwa ngwa, ya mere onye na-ehi ụra na-atụ uche ha.
Ọ bụ ezie na ihe niile ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile maara banyere Black Friday na ihe ụbọchị a pụtara, ole na ole maara uru nke oriri na ọṅụṅụ na ọ pụtara maka ndị na-azụ ahịa na Monday na-esote. Mana iji ghọta nke ọma ihe Cyber ​​​​Monday bụ n'ezie, anyị ga-ebu ụzọ nyochaa ụbọchị Black Friday. Ọ bụ otu n'ime ụbọchị azụmahịa kacha asọpụrụ na nke a na-akwanyere ùgwù site n'aka ndị ọrụ, ndị na-azụ ahịa, ndị na-azụ ahịa na ọbụna site na azụmahịa na ụlọ ọrụ. Ụbọchị pụrụ iche nke onyinye, ahịa na mbelata na ụlọ ahịa niile na edemede niile pụtara. Ma, n'agbanyeghị na mbụ a na-eme ya naanị na United States, nke nta nke nta ọ na-agbasa ma na-edokwa nsọ na mba ndị ọzọ dị nso na kwa n'ọtụtụ mba ndị so na European Union.
Spain na-agbakwa Black Friday, n'agbanyeghị na anyị nwere obi ụtọ na afọ ojuju na ya, anyị chọrọ isonye na ememe nke abụọ, nke a maara dị ka Cyber ​​​​Monday, nke a makwaara na Spanish dị ka cyber Monday. Ọ bụ ezie na n'oge Black Friday, a na-enye ụdị dị iche iche maka ụdị ọ bụla na ụlọ ahịa niile, na Monday ọ bụghị otú ahụ, ebe ọ bụ na ụbọchị ahụ onyinye na ego na-ezubere maka ịzụrụ n'ịntanetị na ụlọ ahịa dijitalụ. Dịka Black Friday bụ ụbọchị ịzụ ahịa kachasị na nke kachasị mkpa n'afọ, Cyber ​​​​Monday bụ, mana naanị maka ịzụrụ ihe n'ịntanetị. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-azụ ahịa na-ahụ n'anya ịzụ ahịa site na sofa n'ụlọ ma ịchọrọ iji ụbọchị a mee ka uwe gị dị ọhụrụ, ngwá ụlọ, ihe egwuregwu, ngwaahịa eletrọnịkị ma ọ bụ zụta ihe ịzụrụ ekeresimesi na ọnụ ahịa kacha ala, nke a bụ ụbọchị gị. . Nọgidenụ na-agwa onwe gị ka ị nweta uru Cyber ​​​​Monday nke afọ a wee mụta ọtụtụ uru ya.
A ga-enwekwu azụmahịa laptop ka Cyber ​​​​Monday gachara?
Tupu mgbe ahụ, Cyber ​​​​Monday dị naanị otu ụbọchị, ya bụ, Mọnde na-esote Fraịde nke Black Friday. Agbanyeghị, ọ gbasaala ọzọ ugbu a, anyị nwere ike ikwu maka izu Cyber ​​​​, ya bụ, onyinye a na-adịgide n'ime izu.
N'ezie, ọ bụrụ na ị na-achọ azụmahịa na laptọọpụ na Cyber ​​​​Monday, anyị na-akwado ka ịzụrụ ya n'ụbọchị ahụ ma echela ruo nkeji ikpeazụ ma ọ bụ na ị ga-enwe ike ịpụ na ire ere.
Enwere usoro dị iche iche n'etiti ụbọchị abụọ ahụ, nke bụ isi bụ nke anyị tụlere. Iji malite, nke Black Friday Ebumnobi ya bụ ibubata ndị ahịa na ndị ahịa n'ụlọ ahịa na ebe anụ ahụ. Ụlọ ahịa windo, na-agba ọsọ maka azụmahịa kacha mma, ma na-enyere ndị achụmnta ego aka ka ha gwụchaa, ngwaahịa ndị na-ereghị n'oge gara aga, ma ọ bụ kpughee nnukwu ngwaahịa ndị na-emeghị nke ọma dịka ha kwesịrị na ọnụahịa mbụ. N'ịbụ ndị nwere nnukwu ego na-enye ụdị dị iche iche, ha na-agba anyị ume iburu ụgbọ ala, gaa n'ebe a na-ere ahịa na ịzụ ahịa ekeresimesi obere oge tupu, na mgbakwunye na imefu karịa ka anyị chere na anyị ga-emefu. Ọ bụ okwu dị ezigbo mma ma ndị obodo ma ndị na-azụ ahịa, na-amasịkwa ha abụọ.
N'ihe banyere Cyber ​​​​Monday, isiokwu nke onyinye a na-emegharị ugboro ugboro na ihe ndị a na-enye nwere ike ịdị mma ma ọ bụ dị mma karịa na Black Friday, ma na isi ihe dị iche na ihe ndị ahụ niile na ihe niile nwere ike ịchekwa na-ejedebe na ibe weebụ. , ngwa ịzụ ahịa na gburugburu dijitalụ. Cyber ​​​​Monday bụ ụbọchị pụrụ iche ịzụrụ n'ịntanetị, nke ahụ bụ ihe na-ekpebi ihe ị ga-eburu n'uche, n'ihi na ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga ụlọ ahịa ka ịhụ ngwaahịa ma metụ ha aka, ọ ga-esiri anyị ike. Onyinye bụ maka ụlọ ahịa dijitalụ, ọ bụghị nke anụ ahụ. Ọ gwụla ma otu ụlọ ahịa gbatịpụrụ ihe Black Friday na-enye ruo Mọnde, ị ga-aga na webụ ma ọ bụ site na ngwa iji zụọ ihe wee were uru nke mbelata ahụ.
Ọtụtụ ụlọ ahịa na nyiwe ndị ọkachamara na teknụzụ, kọmpụta na ngwa eletrọnịkị nwere ikpo okwu webụ ma ọ bụ ngwa iji nye anyị ngwaahịa ha. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ịchọta ụlọ ahịa dịka Mediamarkt, Fnac, Amazon ma ọ bụ Ngwa PC. Ha niile na-esonye na ọdịnala a kwa afọ wee wetara anyị usoro onyinye na mbelata maka Black Friday, ọzọkwa, ha na-ewetara anyị ahụmịhe ịzụ ahịa na-enweghị atụ n'oge Cyber ​​​​Monday. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịzụta ngwaahịa ọ bụla nke ụdị ọ bụla n'ụbọchị ịzụ ahịa ịntanetị a, ngwá electronic na kọmputa bụ ihe kachasị dị egwu, n'ihi ọnụahịa mbụ ha dị elu yana na ụlọ ahịa ndị a na-ere ha bụ ndị mbụ na-eweta nhọrọ maka ịzụrụ ihe n'ịntanetị. .
Kedu ngwaahịa ị na-eche ogologo oge ịzụrụ? Kedu ihe ị ga-achọ imegharị mana amatala n'ihi ọnụ ahịa ya dị elu? A na-ejikọta azịza ya na kọmpụta ma ọ bụ ngwaahịa eletrọnịkị, dị ka smartphone, mbadamba ma ọ bụ kọmputa. Ọnụ ahịa laptọọpụ nwere ike ịdị iche iche. Ọ bụrụ na anyị na-aga na nke kacha ala na nke kacha ọnụ, anyị ga-ahụ kọmputa maka 100, 200 na 300 euro, ma ọ bụghị ha niile nwere ike imeju anyị, ma n'ihi nkọwa ha ma ọ bụ àgwà ha. Ọ bụrụ na anyị na-arị elu ntakịrị ihe na-achọ a etiti nso, ndị ahịa ga-gburugburu € 600 ma ọ bụ € 700, na ọ bụrụ na anyị na-achọkwa a kpọmkwem ika, dị ka Apple. Ka anyị hụ n'okpuru ihe anyị ga-eme ma ọ bụ ebe webụsaịtị na ụlọ ahịa anyị nwere ike chọọ ịchọta MacBook na ọnụahịa kacha mma.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ dị ọnụ ala na Cyber ​​​​Monday
AmazonIhe ọ bụla ị na-achọ, o doro anya na ị ga-ahụ ya na Amazon. Ọ bụ ụlọ ahịa na-ere ahịa n'ịntanetị na-eduga na ọ bụghị naanị na-enye azụmahịa dị mma, kamakwa na-ekwe nkwa, ọrụ ndị ahịa na ọrụ mgbe ire ere. Maka ọtụtụ, gụnyere onwe m, ọ bụ nhọrọ mbụ mgbe niile, na n'oge Cyber ​​​​Monday ha na-enyekarị ahịa ike ike, n'echiche na mbelata ahụ dị mkpa.
mediamarkt- Ọ bụrụ na ị nụtụla ma ọ bụ hụ slogan "n'ihi na abụghị m onye nzuzu," mgbasa ozi ahụ bụ maka Mediamarkt. Ọ bụ agbụ nke ụlọ ahịa eletrọnịkị nke sitere na Germany na, dị ka ndị dị otú ahụ, na-enye ọnụ ahịa dị mma na ihe ọ bụla metụtara ụdị ihe a. Ọnụ ahịa dị mma ka na-akawanye mma na ụbọchị ụfọdụ, dị ka Cyber ​​​​Monday, nke nwekwara ihe kpatara ya bụ ire ere na ngwaahịa eletrọnịkị. Ịzụta "Cyber ​​​​Monday" na Mediamarkt bụ nzọ dị mma.
Kwadoro: Site na Portugal na-abịa Worten, ụlọ ahịa ọzọ pụrụ iche na ngwá electronic na-arụ ọrụ na Iberian Peninsula (Spain na Portugal). Ha na-ewu ewu karịa ụlọ ahịa ndị ọzọ na anyị agaghị ekwu ebe a, n'ihi ya, ha nwere ike ịbụ nhọrọ na-adọrọ mmasị karị. Olee otú nke ahụ ga-esi kwe omume? Ọfọn nanị n'ihi na ha ga-adọta uche nke ndị ahịa na-amaghị ha ma. N'oge Cyber ​​​​Monday, ha ga-enye laptops dị ọnụ ala nke, n'ụdị ụfọdụ, ga-adị gburugburu 40%, ma ọ bụ gafere ya ma ọ bụrụ na akụrụngwa sitere na akara ama ama ama ama dị ala.
nrutu: yinye nnukwu ụlọ ahịa nke Continente, mgbe njikọkọ gasịrị, furu efu ka ọ pụtakwa na French Carrefour. Site na nchekwa zuru oke, anyị niile maara ụlọ ọrụ na yinye a, n'agbanyeghị na ọ nwere ike bụrụ ụlọ ahịa n'ime obodo ebe ị na-azụrụ ihe kwa ụbọchị. N'aka nke ọzọ, ha nwekwara nnukwu ụlọ ahịa ebe anyị nwekwara ike ịhụ ihe ndị ọzọ, ndị na-eletrọnịkị ngalaba nke anyị ga-ahụ laptọọpụ. Na n'oge Cyber ​​​​Monday, ọnụ ahịa Carrefour dị mma ka ga-aka mma mgbe ihe anyị na-achọ bụ ihe metụtara ụdị ngwaahịa a.
Ihe PC: aha ya na-eme ka o doo anya ihe ọ bụ, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala otú e si mụọ ya. Ngwa PC malitere dị ka ụlọ ahịa na-ere kọmputa na akụrụngwa maka ha, ma taa, ha agbasawanyela katalọgụ na ahịa ha. Ọnụ ahịa ha siri ike imeziwanye, ọ gwụla ma anyị lere ha anya n'oge Cyber ​​​​Monday, mgbe anyị nwere ike ịzụta laptọọpụ niile agba, ụdị na nha na ọnụ ahịa kacha mma.
Fnac: Sitekwa na France na-abịa Fnac, ụlọ ahịa ebe anyị nwere ike ịzụta akwụkwọ, egwu na ihe ndị ọzọ metụtara ngwá electronic. Ọ bụ na ngalaba ikpeazụ a ebe anyị ga-ahụ laptọọpụ na, ọ bụrụ na n'ime afọ ndị ọzọ ọnụ ahịa na-asọmpi, n'oge Cyber ​​​​Monday, anyị ga-enwe ike ịchọta ụdị nwere ọtụtụ narị euro nke ego.
Ụlọikpe Bekee: maka ndị anyị bụ ndị dị afọ ole na ole, El Corte Inglés enyela anyị ezigbo vibes. Ha bụ otu n'ime nnukwu ụlọ ahịa ole na ole nne na nna anyị na-ebuga anyị site n'oge ruo n'oge, mana taa enwerelarị ọtụtụ ụlọ ahịa ndị yiri ya, ma ọ bụ ọbụna otu ECI n'ịntanetị. N'ime katalọgụ ha, anyị na-ahụ ihe niile, mana ha pụtara maka ụdị ejiji na akụrụngwa elektrọnik ha. Ọ bụ na nke ikpeazụ ebe anyị ga-ahụ laptọọpụ, na ọ bụ na Cyber ​​​​Monday ebe anyị ga-ahụ kacha mma ego.
Laptọọpụ Cyber ​​​​Monday: Index na-enye
1 Cyber ​​​​Monday 2022 na-emekọ na laptọọpụ
2 Laptọọpụ na-ere na Cyber ​​​​Monday
2.1 Akwụkwọ ndetu HP
2.2 I7 laptọọpụ
2.3 I5 laptọọpụ
2.4 Laptọọpụ egwuregwu
2.5 Lenovo laptọọpụ
2.6 Asus laptọọpụ
3 Cyber ​​​​Monday na MacBook
4 Kedu mgbe bụ Cyber ​​​​Monday 2022
5 A ga-enwekwu azụmahịa laptop ka Cyber ​​​​Monday gachara?
7 Cyber ​​​​Monday na Laptọọpụ
8 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ dị ọnụ ala na Cyber ​​​​Monday
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Mgbidi » Cyber ​​​​Monday na laptọọpụ